Paris Saint-Germain, Iyo Inter Milan Oo Ku Biiraya Tartanka Georginio Wijnaldum'
Home Horyaalka Ingiriiska Paris Saint-Germain, iyo Inter Milan oo ku biiraya tartanka Georginio Wijnaldum’
Paris Saint-Germain, iyo Inter Milan oo ku biiraya tartanka Georginio Wijnaldum’
Paris Saint-Germain iyo Inter Milan ayaa lagu soo waramayaa inay ku biireen loolanka loogu jiro saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Liverpool Georginio Wijnaldum .
Xiddiga reer Holland qandaraaskiisa Anfield weli lama xallin, iyadoo haatan aysan wax socon hadanaheshiiskiisa kooxda heysata horyaalka Premier League ee xidigan ayaa dhici doona xagaaga.
Wijnaldum ayaa weli lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqayo Barcelona si uu ula midoobo Ronald Koeman , laakiin kooxda reer Catalan ayaa la filayaa inay tartan adag kala kulmaan saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe.
Sida laga soo xigtay Le Parisien , PSG ayaa indhaha ku haysa xoojinta qadka dhexe waxayna jeclaatay Wijnaldum, sidaas darteed xagaaga ayaa loo dhaqaaqi xidigan qaabka lagu heli karo.
Si kastaba ha noqotee, warbixin ka duwan FC Inter News ayaa sheeganeysa in Nerazzurri ay sidoo kale il gaar ah ku hayaan waxyaabaha soo kordha, iyadoo Wijnaldum uu u muuqdo mid sii kordheysa oo soo gabagabeynaya shan sano oo uu joogay Anfield bilo yar gudahood.
Inkasta oo ay wali jiraan warar la isla dhexmarayo oo ku saabsan mustaqbalkiisa, Wijnaldum ayaa weli ah ciyaaryahan muhiim u ah shaqada Jurgen Klopp xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay labo gool 25 kulan oo Premier League ah.
Previous articleLaacibka kooxda Everton ee James Rodriguez ayaa meesha ka saaray ku laabashada Real Madrid
Next articleLiverpool “aad ayey uga murugootay” geerida aabihiis Alisson Becker